Talooyin Top waa in aad ogaato oo ku saabsan dhiig shabakadaha on Mac
Waa maxay waxa ugu dhibsado oo ku saabsan internetka? Qaar badan oo naga mid ah isku waafaqsan yihiin in waxa ugu niyad waa marka bogga aanu ku shuban si fiican ama waxa ay qaadataa waqti aad u badan, waayo isbedel ku dalban (ie xidhiidhinaya server, hubinta tirakoobka dhawaan iwm). Helitaanka ayaa si degdeg ah u dhammaan macluumaadka loo baahan yahay waa sababta ugu wayn ee Internet waxa uu noqday waxaas oo kale muhiim ah in nolosheena. Waxaan u qiimeeyaa sida wax siiyey oo markii bartey ku guuldareysto in ay buuxiso baahida our, dareenka badan xun sida caadiga ah ka muuqan. In this article annaguna ma ay noqon doontaa mid aad u farsamo, halkii aan si kooban u guudmari doontaa siyaabaha ugu muhiimsan ee sida webpage ah labada users Mac iyo Windows in ay dhaqaalo ka helo, sida caadi ahaan waxaa fiican in wax dhib ah oo loading qaban. Sidoo kale, qaybta labaad, habka ah 'helid adag' ee daalacashada ugu weyn waxaa lagu sharaxi doonaa.
Waa maxay cabdo webpage?
Ugu horrayn, marka aad webpage ugu ceshadaan, biraawsarkaaga jiidayo taariikhda ka khasnado.
Waxay kaa caawinaysaa in markii qaar ka mid ah macluumaadka ma si sax ah ku shuban ama markii hore la waayay. Xaqiiqo ahaan, waxaan inta badan sameeyo, waayo, intii aannu bogga internetka isticmaalaya, isbedelada ka dhacay qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa oo ka kooban in uu is beddelay iyo sidoo. Bogagga badan ayaa ah feature 'helid si toos ah', laakiin dhammaantiin ma aha iyaga ka mid ah. Howlgalkan waxuu si gaar ah faa'iido, marka aad sugaysid muhiim ah e-mail ama xogta ugu dambeeyey, kaas oo laga yaabo in la beddelo kasta labaad (tusaale ahaan, marka aad hubinayso tirada views on YouTube channel - waxaa laga yaabaa in si joogto ah la beddelo).
Sida loo raaxayn webpage ah?
Sida caadiga ah, Kadib leeyihiin badhanka 'Refresh' meel shaashadda. Waxaa sida caadiga ah u muuqataa wax sidan oo kale:
Button waxa uu ku yaalaa meel ka soo socda si ay 'Address Bar'. Gujinaya in ka dhigi doonaa browser webpage ugu ceshadaan.
Haddii kale, waxaad u raaxayn kartaa masruufaan si fudud adiga oo riixaya badhanka 'F5'. Tani waxay ka shaqeeya oo dhan daalacashada Internet casri ah ee Windows .
Haddii aad tahay kibirsan Mac user, halkii 'F5' aad u baahan tahay si ay u riix 'Command + R' badhamada halka browser:
Habka saddexaad suurto gal ah si fudud waa adigoo gujinaya meel internet-ka ee la badhanka XAQA jiirka (RMB) iyo doorashada 'Reload'.
In kastoo, xaaladaha qaarkood loo siiyaa biraawsarkaaga tusaysaa version ah oo gaboobay oo ah bog halkii ay ka mid ka mid ah ugu danbeeyay. Sidaa darteed, aad ayan u arkin ee web site updated iyo seegi wax muhiim ah. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah browser, si ay u qabtaan loading xogta sida ugu dhakhsaha badan, waxaa laga yaabaa in ay ku shuban khasnado, kaas oo ku kaydsan wadid aad u adag halkii ay ka Web ah. Si aafadan la tacaali, aan u isticmaalno Hard Refresh - nadiifinta aad kayd u ​​website gaar ah oo ku qasbaya biraawsarkaaga in xogta laga Web isticmaali. In kastoo, habkan qaadataa waqti badan helid caadiga ah. Barmaamijyada kala duwan waxaa laga yaabaa in lagu sameeyo habab wax yar oo kala duwan:
Ku hay 'Ctrl' oo guji 'Reload' button; haddii kale, qaban 'Ctrl' iyo saxaafadda 'F5'.
Google Chrome u Mac:
Ku hay 'Shift' oo guji 'Reload' button; haddii kale, qaban 'Lauch' + 'Shift' iyo saxaafadda "R".
Ku hay 'Ctrl' iyo saxaafadda 'F5'; haddii kale, qaban 'Ctrl' + 'Shift' iyo saxaafadda "R".
Mozilla Firefox u Mac:
Ku hay 'Ctrl' iyo saxaafadda 'F5'.
Safari u Mac:
> Resource > Mac > Talooyin Top aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan shabakadaha u cusboonaysiinta ee Mac iyo Windows